Himilo Editor | Himilo Media Group
Author Archives: Himilo Editor
Waa Maxay Koronafayrus? Marka hore aynu ku horrayno fayrusku wuxuu yahay. Ilma-aragtada nololayda ah waxa si kooban loogu qaybiyaa sadeex; Fungi, Backteria iyo Fayrus. Fayruska ayaa ugu sii yaryar saddexdaa oon xataa microscope-ka caadiga ah lagu arki karin, sidoo kale halka labada kale kelidood u tarmi karaan, faryusku keli ma tarmi karo, waxay u baahan yihiin inay unug kale oo ...
Hargeysa,(Himilo)-Guddida heer qaran ee uu dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland u magacaabay u diyaar-garawga iyo ka hortagga xanuunka CORONAVIRUS, ayaa maanta soo saaray go’aamo muhiim u ah badqabka iyo fayo-dhawrka bulshada Somaliland oo ay waajib tahay fulintoodu. War-saxaafadeed ay guddidu goor dhaweyd soo saareen oo Nuqul ka mid ahi uu soo gaadhay Wargeyska Himilo ayaa waxa uu u dhignaa sidan:- War-saxaafadeed ...
Hargeysa, (Himilo)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa si qoto dheer uga hadlay xanuunka saf-maareenka ah ee dunida oo dhan ku faafaya ee Corona Virus iyo sida ay dawlad ahaan ugu diyaar garoobeen ka hortagga iyo la tacaalista xaalad kasta oo kasoo korodha xanuunkaas adduunka saameeyey. Madaxweynaha Somaliland oo saxaafadda kula hadlay qasriga madaxtooyada oo ay hareero joogaan xubnaha ...
Hargeysa (Himilo)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa waxa uu wareegto madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/XM/G/083-488/032020, ku magacaabay Guddida Heer Qaran ee U-diyaar-garawga iyo Ka-hor-tagga Xanuunka Coronavirus. Nuqul ka mid ah Wareegtadan Madaxweynaha oo soo gaadhay Wargeyska Himilo ayaa waxa ay u dhigneyd sidan:- Waxaanay u dhignayd Wareegtada Madaxweynuhu Sidan:- Wareegto Madaxweyne Ku: Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Ku: Wasiirka ...
Washington (Himilo)-Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in halka ay Dowladda Mareykanka ka taagan tahay biyo xidheenka muranka dhaliyay ee Nile uu yahay “mid aan la aqbali karin.” Laanta af Soomaaliga ee Idaacada BBC-da ayaa warkaasi wax ka qortay waxaanu u dhignaa sidan; Washington ayaa wadahadal ka dhex waday dalalka Masar iyo Itoobiya oo in muddo ah ku muransanaa mashruuca biyo xidheenka ...
Hargeysa, (Himilo)-Madax-dhaqameedka Beelaha Habar Jeclo iyo Gar-xajis ayaa ku dhawaaqay in ay 15-ka bishan Magaalada Burco ka qabsoomayo Shir dhaqameed u dhexeeya labadaa beelood. Shirkan oo ay Gogoshiisa fidisay Beesha Habar Jeclo ayaa waxa muddada uu qabsoomayo iyo ujeeddada laga leeyahay shaaciyey Suldaanka guud ee Beesha Habar Jeclo Suldaan Cabdillaahi Suldaan Cali, kaasi oo Saxaafadda kula hadlay Hargeysa oo odayaasha ...
Hargeysa, (Himilo)-Madaxweynaha JSL Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xil ka qaadis, isku beddel iyo magacaabis ku sameeyey xubnaha Golaha Wasiiradda. Sidaana waxa lagu cadeeyey War-saxaafadeed uu soo saaray Af-hayeenka Madaxtooyada oo soo gaadhay Wargeyska Himilo oo u dhignaa sidan:- Taariikh: 01/12/2019 WAREEGTO MADAXWEYNE Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxa uu wareegtooyin Madaxweyne oo summadahoodu yihiin JSL/XM/XKQ/222/1-387/122019 iyo JSL/XM/WM/222-388/122019 uu xilka ...